FANANGANANA NY TANAMASOANDRO : Miroso ny fifanarahana amin’ireo tompon-tanimbary
Velaran-tany hatrany amin’ny arivo hekitara no hananganana ny tetikasa Tanamasoandro. 10 octobre 2019
Ankoatra ny tanety izay voakasiky ny tetikasa dia misy ihany koa ireo tanimbary tsy maintsy hototofana. Mahakasika an’ity farany izay niteraka resabe satria misy amin’ireo tompon-tany no milaza ho tsy manaiky ny hanotofana ny tanimbariny izay efa nohajariany an-taonany maro. Ny fitondram-panjakana tarihin’ny Filoha Andry Rajoelina izay tompon-kevitra amin’ny tetikasa ity anefa dia nanome toky fa tsy hanary azy ireo velively. Tsy misy ho very maina ihany koa izay tany voakasiky ny tetikasa fa tsy maintsy honerana.
Tsy mijanona ho fampanantenana ambony latabatra fotsiny izany, asa avy hatrany ny an’ny Filoham-pirenena. Afak’omaly nisy ny fidinana ifotony nataon’ny tompon’andraikitra teo anivon’ny Apipa teny amin’ny faritra hanaovana ny fanorenana. Nandritra izany no nihaonany sy nanaovana ny fifampiraharahana tamin’ireo tompon-tany sy tompon-tanimbary. Nohazavaina an’izy ireo tamin’ny antsipiriany ny fomba hanonerana ny taniny. Araka ny fandalovan’ny Filoha Andry Rajoelina nandritra ilay fandaharana manokana tao amin’ny fahitalavi-panjakana ny alahady lasa teo dia nambarany fa tsy soloina fotsiny ny tanimbaran’ireo tantsaha voakasika fa soloina hatrany amin’ny avo telo na avo dimy heny mihitsy.
Raha ohatra, hoy ny Filoha, ka mamboly vary eo amin’ilay tany hototofana izy ka mahavokatra dimy taonina isan-taona izany dia azoko omena tany maimaim-poana any Bevoay izay mahavokatra vary 10 ka hatrany amin’ny 15 taonina. Heverina ho tsy mifanalavitra amin’izay ny fifandresen-dahatra nataon’ireo tompon’andraikitry ny Apipa tamin’ireo ankohonana manana tany eny Ambohitrimanjaka sy ny manodidina. Voalaza fa maherin’ny telo hetsy ny olona voakasika ao anatin’izany. Ankoatra ny fanonerana tany anefa dia vonona amin’ny fividianana tany ihany koa ny fanjakana.